WARRAAQSI UMMATAA WAAN HIN JIJJIIRRE HIN QABU! -
By Falmataa | January 12, 2018
Qixxeessaa Lammii | Amajjii 12, 2018
QBO ABOn waggoota danuuf geggeeffamaa ture babal’atee humna qajalee dhaloota ammaa hortee ABO dhaqabuun jijjirama xixxiqqaa maddisiisuu erga jalqabee bubbulee jira. Keessummaa baroota sadan dhihoo dabranii as mootummaa nama nyaataa Wayyaanee afaan lafatti gobbisee warwaachisiisuu itti fufee jira. Oromiyaa irratti Oromoon abbaa ta’uu haa xiqqaatuu mallaattoo gara garaa lafa irratti argamsiisee jira. Bu’aalee qabsoo hadhooftuu fi wareegama qaalii ummata Oromoo addatti ABO gaafate irraa argaman kana daran gabbisuuf ammalee qabsoon hadhaawaan akka nu hafu dagachuu hin barbaacchiwsu.
Gaaffii guddicha saba bala’aa Oromoof deebisaa caccalaqqee bubuutuun wushaaluuf yaaluun hin barbaachisu. Nageenyi waaraan naannoo Oromiyaa guututti argamuuf gaaffiin Oromoo guutuun deebii argachuun dirqama bira taruun hin danda’amne. Labsiin mootummaan Wayyaanee kan warraaqsa QBO ykn Qeerroo Bilisummaa Oromoo ABOn ijaarameen darrate teessuma isaa cufamaa eega fixate booda baasaa jiru jaalatee osoo hin taane dirqamee akka ta’e beekuun barbaachisaadha. Ibsa ijjatnoo dhaadatnoon gabbifame gadi dhiise booda sodaa dhaba ummataa arginaan itti fufee mana hidhaa Maa’ikalaawiii magaalaa Finfinnee keessa jira ni hidha jedhee lallabuuf dirqamuu isaa warraaqsa ummataattu dhalche malee waan inni jaalatee godhee miti.
Manneen hidhaa hidhuu, diiguu, jijjiiruu fi haarahoomsuu irraa bu’aan argamu hin jiru. Kan badii dhala namaa irratti raawwatee badii qabu mootummaadha malee manneen hidhaa miti.Ffurmaatni waaraan kan argamu manneen hidhaa hidhuun osoo hin taane ilmaan namaa hidhuun dararuu dhaabuudha. Hidhaa fi ajjeechaan gaaffii ummataa hafnaan kan namoota tokkeetuu deebisuun dogongora guddaadha. Mootummaa hidhaa fi ajjeechatti amanu, mirga uumaa dhala namaa hin beekne ykn beekuu hin feene irraa borus nagaya kajeeluun gowwummaadha. Gaaffii ummataaf deebiin qabsaan kan argamu eega mootummaan kun gara gale booda.
Labsoota tasgabbeessaa gara garaa baasuun gara nyaattoo ummata irraa horachuuf kan godhaa jiru malee onneen itti amanee akka hin taane beekkamaadha. Hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaatii gadi lakkisa henna jedhu namootuma dhageettii qaban qofa akka ta’e ifaadha. Dhalli namaa mana hidhaa keessatti ol naqamee unkuramee turee fi jiru cufti mirga isaa gaafachuuf kan hidhame waan ta’eef tokkollee manneen hidhaa keessatti hafuu hin qabu. Nama hagoo baasuun danuu fixuuf karoora bahe ta’uu ummatni biyyattii cufti beekuu qaba. Keessumaa addatti ummatni Oromoo kana akka gaaritti beekee qeeqaan eeguu qaba.
Dhalli Oromoo maqaa ABOn bara 1991 irraa hidhamee hidhaa keessa jiru cufti hiree kanatti abbaa ta’uu qaba. Mootummaa shoorarkeessaa shoorarkeessummaan dhala Oromoo bara dheeraa bulchiinsa irraa kana keessatti kumaatamoota dhibbaan hidhee dararaa tureef garaa laafuu fi dhiifama gochuun waan hin kajeelamne. Ilmaan Oromoo cufa manneen hidhaatii hiikuu qofa osoo hin taane gumaa jiruu fi jireenya isaanii kan balleesses mootummaan kun baasuu qaba. Akkasuma Oromoota harka isaan fixes gumaa lubbuu isaanii baasuu qofa osoo hin taane itti gaafatamuu qaba. Kana malees biyya akka Erteraa, dhaabota akka ABO, GINBOTI 7, Midiyaalee Oromoo kanneen akka OMN kan maqaa ABOn wal qabsiisee garee golesitootaatti paarlamaa ofii hijaarateen remadchiifatee hawaasa addunyaa biratti akka isaan fudhatama hin qabne ykn hin argatneef olola dharaa irratti ofee oofsisaa turee fi jiru cufaa dhiifama gaafatee qulqullumaa isaanii dirree baasee labsuu qaba. Warraaqsi ummataa waan hin jijjiire akka hin qabne amanee fudhachuun isaa tarkaanfiilee armaa olitti fudhachuu qabu kana erga fudhate booda adda baha malee mootummaa kana amanuun tasa hin danda’amu. Mootummaa waan dubbatuu fi waan hojjatu addaan hin beekne irra abdii kaahachuun har’a boru jijjirama nuuf fida jedhanii warraaqsa bilchaate irraa sokondii tokkoofis dhaabbachuun hin barbaachisu.
Lubbuun ilmaan biyyaa harka isaan badaniif gumaan kufaatii mootummaa kanaa ta’uu qofa osoo hin taane namootni hoogganummaan fixiinsa kana raawwatanii fi raawwachiisan adaba madaalawaa argachuu qabu.
Warraaqsi Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhoose galma ni gaha!
ABOn haa lalisu!
Irree fi gaachenni Oromoo WBOn haa moohu!
Qeerroon Bilisummaa Oromoo waaru!
← SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Amajjii 12, 2018 Wayyaanee; Murna Kan Jettuu fi Kan Hojjettu Tokko Ta’ee Hin Beekne! →